Fomba mahafinaritra miaraka amin'ny pataloha fotsy amin'ny lohataona | Bezzia
Maria vazquez | | Inona no hotafiko
Ny fitoviana dia tsy mifanaraka amin'ny fomba. Fomba noforonina avy amin'ny akanjo fototra, io koa dia safidy hafa amin'ny fiainana andavanandro. Ary izy io dia eo am-pitadiavana ireo karazana akanjo efa nivoahantsika androany manamboatra ny pataloha fotsy toy ny sombin-javatra lehibe ary fampiononana ho laharam-pahamehana.
Tsy hahita akanjo sarotra amin'ny fomba nofidinay ianareo. Raha ny marina dia mety manana zavatra mitovitovy amin'izany ianao ao an-trano izay azonao soloina. Miaraka amin'izy ireo ary tsy manahirana be loatra ianao dia afaka mamorona akanjo mahafinaritra miaraka amin'ny pataloha fotsy ho an'ity lohataona ity.
1 Ny pataloha fotsy
2 Ahoana no ampiarahantsika azy ireo?
Ny pataloha fotsy
Raha toa ny tanjontsika dia ny mamorona akanjo mampiadana mamela antsika hifindra malalaka sy hanao hetsika isan-karazany, tsy afaka misafidy pataloha izay tsy ahazoantsika aina na tsy mahazo tombony isika. Pataloha sasany landihazo pataloha jeans na chinos safidy mahafinaritra izy ireo. Fa toy izany koa ny hafa be ranoka kokoa ary manana lamina malalaka kokoa.
Ahoana no ampiarahantsika azy ireo?
Vantany vao nisafidy ireo pataloha fotsy izay ahazoantsika aina ireo dia hieritreritra ny fomba hanambarana azy ireo isika. Kardinia misy loko mafana Mety indrindra ny manome hafanana ny androntsika isan'andro raha mbola milamina ny mari-pana. Na dia afaka miloka amin'ny fotsy ihany aza ianao mba hamoronana fomba amin'io loko io hatrany an-doha ka hatrany amin'ny tongotra.
Una akanjo ba tsy miandany na misy dian-tsambo Izy io dia safidy hafa iray hafa tsara hamoronana akanjo mahafinaritra miaraka amin'ny pataloha fotsy. Mba hahatratrarana iray amin'ireo aingam-panahy amin'ny fanatanjahan-tena dia mila mampiditra akanjo vitsivitsy fotsiny ianao. T-shirt izay tsy mifanohitra amin'ny fisafidianana akanjo ambony ofisialy sy vehivavy ambony toy ny lobaka misy vozon'akanjo lehibe, dantelina ary / na ruffles.
Rehefa miakatra ny mari-pana dia miakatra ny tanky ary blouse rongony handray an-tsehatra afovoany. Ireo voalohany dia hanampy antsika handanjalanja ireo volavola raha mifidy pataloha harona; raha ity farany kosa dia hanome fivezivezena amin'ny pataloha voarindra sy mahitsy. Ary koa, rehefa miakatra ny mari-pana, dia azontsika atao ny manolo kiraro amoron-dranomasina amin'ny kapa fisaka mahazatra.
Ahoana ny fomba fampifangaroana ny pataloha fotsy rehefa mitady fiononana ianao?
Sary - @tsangtastic, @talisa_sutton, @deborabrosa, @nereaalos, @mirenalos, @bebowaca, @smythsisters, @collagev waina, @jessiekass
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Fomba fampiononana miaraka amin'ny pataloha fotsy amin'ny lohataona
Antony 6 hijanonana amin'ny fampiasana ny findainao ho famantaranandro fanairana